विश्वविद्यालयहरू भदौमा परीक्षा सञ्चालनको तयारीमा – HostKhabar ::
विश्वविद्यालयहरू भदौमा परीक्षा सञ्चालनको तयारीमा
काठमाण्डौं : झण्डै ४ महिना लामो लकडाउन खुलेसँगै देशभरका विश्वविद्यालयहरू परीक्षा सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन्। गत ६ चैतबाट देशभरका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द थिए।
५ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ भदौबाट शैक्षिक संस्था खोल्ने निर्णय गरेसँगै विश्वविद्यालयहरूको परीक्षाको तयारीमा जुटेका हुन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएका परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्न थालेको छ। विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ।
संस्थानको ६ चैतबाट रोकिएको स्नातकोत्तर तहको परीक्षा यहि ७ भदौबाट हुने जनाएको छ। त्यस्तै स्नातक तहको परीक्षा पनि १५ भदौबाट सञ्चालन गर्नेगरी सूचना प्रकाशित गरेको छ।
संस्थानका डीनको कार्यालयका निमित्त डीन प्रा।डा। सुशिलबहादुर बज्राचार्यले परीक्षा सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी तथा परीक्षा तालिका १५ साउनभित्र प्रकाशित गरिने बताए।
६ गतेबाट लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेसँगै त्रिविले ७ साउनबाट सम्पूर्ण क्याम्पस खोल्न निर्देशन दिएको थियो। सोही बमोजिम त्रिवि अन्तर्गत देशभरका क्याम्पसहरू सञ्चालनमा आएका छन्।
स्थगित भएका परीक्षा दशैं अगाडि नै गर्नेगरी तयारी भइरहेको त्रिवि रजिष्ट्रार प्रा.डा पेशल दाहालले जानकारी दिए। “रोकिएका परीक्षा दशैं अगाडि नै सक्नेगरी तयारी गर्न भनेका छौं। बाँकी परीक्षा दशैंपछि हुन्छन्।” प्रा.डा. दाहालले भने।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि परिक्षाका लागि आन्तरिक तयारीबारे छलफल भइरहेको विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ । यसबारेमा पदाधिकारी बैठक बसेर चाँडै निर्णय सार्वजनिक हुने विश्विद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका निमित्त डीन विष्णु कमलेश डिसीले बताए । उनका अनुसार भदौमा परिक्षा गर्नेबारे बहश शुरु भएको छ ।
त्यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले समेत भदौ पहिलो साताबाट स्थगित परीक्षा गर्ने तयारी थालेको छ। परीक्षा नियन्त्रक प्रा.डा. सूर्यप्रसाद संग्रोलाले एक सूचना जारी गर्दै स्थगित गरिएका परीक्षा भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशिका पालना गर्दै भदौ पहिलो साताबाट गरिने जनाएका हुन्।
विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूलाई त्यही अनुसार तयारी थाल्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै देशभरका अन्य विश्वविद्यालयहरूले समेत परीक्षाको तयारी थालेका छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि एक सूचना जारी गर्दै स्थगित परीक्षा चाँडै हुने भन्दै तयारीमा बस्न विद्यार्थी तथा क्याम्पसिहरू सूचीत गराएको छ।
गत ६ चैतबाट स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका परीक्षा रोकिएका थिए। १ भदौबाट विद्यार्थी भर्ना र रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो।
परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नाका लागि अनुमति दिएपनि सरकारले विद्यालय सञ्चालन अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ।